Chii Upenyu Hwakanaka? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndaiva kufarira nziyo se "Mari Ko chinhu,"Uye ndakanga kuteerera Albums nemazita okuremekedza akadai sokuti" Ibva Rich kana Die Kuedza. "Saka zvechokwadi hazvishamisi kuti pfungwa yangu upenyu hwakanaka akanga ane chikwama saka makazara kuti handizvo kunyange pedyo. Yakanga isiri zvose nezvemari, Zvisinei. Ndakadzidza hedonism, zvepabonde, pfuma, irresponsibility, usimbe, zvinodhaka, uye kuwana kuremekedzwa - zvose sezvo zvidimbu kuti puzzle ndiwo upenyu hwakanaka.
Uye chikuru dambudziko pamwe mufananidzo ndakawana kwoupenyu hwakanaka hwaiva kuti akavakirwa ini. Yakanga zvose pamusoro pangu. Ndingaenda kuwana mari? Ndingawirirana Sei kuremekedza? Ndingaenda kuwana chinzvimbo? Ndingaitei kumhanya nyika? Chii ndakanga achiteerera uye pakudya raiva boka nhema. Zvino vechiduku redhiyo, kunyange pane zvizhinji hudyu-hop zvinoita, zvikuru nezvazvo raguta nhema pamusoro chii upenyu hwakanaka chaizvo.
Regai vandibate zvakaipa kunyange. Hip-hop mumhanzi akanga asiri dambudziko. nhema ivavo vanotadza vaiva. Chikonzero Ini zoomed pamusoro hudyu-hop ndechekuti zviri tsika nemagariro angu uye chokwadi. Ndaigona ndakakunda kuvenga hudyu-hop, asi ndichiri kungadai zvokudya nhema iyoyo chaiyo nomumwe munhu. Uye yangu anongozvifunga, mwoyo kubwinya-nzara dzikaidya.
Asi kana ndakasangana Jesu zvose achinja. Ini chakasangana mutsva mufananidzo wenyika uye mufananidzo mutsva upenyu. Uye saka ndakanga itsva Vachiedza kufunga sei kurarama upenyu zvizere. Ndaisada kurarama upenyu muchiedza nhema zvakare. Ndaida chokwadi.
Kana tikaramba kutenda nhema pamusoro sei tinofanira kurarama, migumisiro machechi. Tichava kwete kurarama neimwe nzira; hatizobatwi kurarama nenzira takasikwa kuti. Tichatevera kupambadza hwedu kudzingirira zvinhu kuti hazvina basa. Tichafamba kusuwa tanidzwa. Hatidi mufaro wechokwadi uye kugutsikana. Hatidi kurarama kufanana takasikwa kuti tirarame. Hatidi kurarama upenyu hwakanaka.
Chokwadi Rugwaro kumbobvira anoshandisa izwi rokuti "upenyu hwakanaka." Asi kana tichiti "upenyu hwakanaka" isu kureva kazhinji yakanakisisa muupenyu mhando tinogona kurarama. Saka ndinoda kuwana pane zvakanakisisa mhando upenyu rutsigiro. Ndinoda kuti tirarame nenzira takasikwa kuti tirarame. Saka ndinoda kutarisa zvinhu zvitatu upenyu hwakanaka.
ini. The Life Good iri Kurarama By Kutenda Muna Mwari Akanaka
Mubhuku kuti sei ini kutsanangura upenyu hwakanaka. Kurarama nokutenda muna Mwari wakanaka. Uye regai ndikuudzei nei.
TOSE achararama nokutenda
Tingava tichizviziva kana kuti kwete, tose tiri vanhu kutenda. Munhu wese. vaKristu, vaMuslim, vaHindu, vaBuddha, Agnostics, Hakuna Musiki - tose kurarama nokutenda, tiri kurarama muchiedza izvo tinotenda chero nguva. Avo imi vatambi vanoita kundiomera. Sei? Nokuti imi munotenda here achakuisa nani pane mutambo wako (kana iwe neni kukura kutamba basketball uye ichiri zvakaipa chaizvo). Kana sei nezvazvo. Vamwe venyu kuisa kero Google Maps kuwana pano nhasi. Sei? Nokuti makatenda kuti foni yako kukupai zvakarurama mirayiridzo. Kana ukatenda foni yako ungadai kumunyengera iwe, izvo Ndinofunga anoita vangu dzimwe nguva, hamaizopa akarishandisa. Ndaigona kuenda mberi. Asi isu tose kurarama nokutenda.
Ini kutaura nezvazvo mubhuku. Ndiri zvakaipa chaizvo pamwe mirayiridzo. Mudzimai wangu aigara vakashamiswa sei mbeveve ndinewe mirayiridzo. Imwe nguva ndakaenda vakakwevera kuva rinochengeterwa kuti atendeuke, asi zvino Ndakadzokera panze saizvozvo. chaizvoizvo zvakaipa. Kungava chimumumu chaizvo kuvimba neni kukutungamirira. Saizvozvowo, tose vawa. Mwoyo yedu kutitungamirira mugwara risiri. Dhiabhorosi anodyisa isu nhema, nyika anovapavhurira navo, uye mwoyo yedu kudya navo. Saka pane kubvumira mwoyo yedu kuti atitungamirire, tinofanira kurarama nokutenda muchokwadi.
Uye akanakisisa chete kutiudza sei zvakanakisisa kurarama upenyu uyu Mwari pachake. Hatidi chete kumumirira kudonhedza ubatsirwe kubva kuDenga; tinotarisa chii kare Ari akati. dambudziko wedu tinotenda nhema muvengi pamusoro chokwadi chaMwari.
Mwari akasika Adhamu naEvha. Akavapa mirayiridzo sei kurarama. Akati vaigona kudya miti yose, kunze muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa.
Zvino nyoka yakanga ina manomano kupfuura dzimwe mhuka dzesango Jehovha Mwari dzaakange aita. Akati kumukadzi, "Ko, chaizvoizvo Mwari vanoti, 'You Haafaniri kudya muti upi zvawo uri garden'?"Mukadzi akati kunyoka, "Tingadya hedu michero inobva mumiti iri mubindu, asi Mwari akati, 'You Ngaarege kudya muchero womuti uri pakati pebindu, kana kuubata, urege die.' "Asi nyoka yakati kumukadzi, "Hamungafi zvirokwazvo. Nokuti Mwari anoziva kuti mukaudya muchazarurirwa meso ako, uye iwe uchava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. "Saka kana mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kuva chikafu, uye kuti akanga ari waifadza meso, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora muchero yawo, akadya, uye iye akapawo kumurume wake uyo aiva naye, uye akadya. (Genesis 3:1-6 BSN)
Adhamu naEvha vakatenda nhema nyoka pamusoro chokwadi chaMwari. Iri dambudziko redu guru uyewo. Tinotenda nyika apo vanotiudza kuti vane chinhu nani kupa kupfuura Mwari. Tinotenda nyama yedu kana rinotiudza kuti kutarisa kuti Website. Tinotenda dhiabhorosi paanoti tave panguva nechepakati wezvose. Tinotenda avo nhema pane chokwadi chaMwari. Uye ndizvo akatichengeta kubva upenyu hwakanaka.
The upenyu hwakanaka kunotanga apo isu adzore zvedu, takasarudza kusiya zvose yokusateerera kwedu shure, uye isu takatenda muna Jesu. Ndicho apo upenyu kwechokwadi kunotanga. Asi kutenda kwedu haasi kugumira ipapo. Tinofanira kurwisa nezuva kuramba kuvimba Mwari uye kutenda kwaari pamusoro nhema nomuvengi.
KUTENDA IS AN nezuva Washington
Ndinoziva handisi ndoga mutadzi pano usiku huno. Uye kazhinji tinofunga patinotadza, kuti nokuti taiva ichi nguva utera. Asi haasi nyaya yose. chivi chose dambudziko idambudziko kutenda. Tinotadza nekusatenda. Tinotenda rwomudzivisi nhema uye kuteerera navo pane chokwadi chaMwari.
Saka kana tikasateerera simba, imhaka yokuti tinotenda nhema kuti simba pane kutikuvadza kwete kutibatsira. Uye nokuti hatitendi Mwari paanoti Akaisa simba panzvimbo zvakatinakira. Zvino isu zvepabonde vasati varoorana, imhaka yokuti tinotenda nhema, kuti ndiyo nzira yakanakisisa kuti vanakidzwe pachedu. Uye nokuti hatitendi Mwari apo Anoti zvepabonde vakaroorana, uye ndiyo akapoteredza apo zviri zvakarurama takanakidzwa.
In Romans 1, Pauro anoti iye achishanda kuti aunze "kuteerera nokutenda" - kuteerera inoyerera kubva pakutenda muna Jesu. Saka sei isu murwire kutenda? Sei isu zvokudya kutenda kwedu?
TINOFANIRA SHOKO RAMWARI
Romans 10 anoti, "Kutenda kunouya kuburikidza nokunzwa, uye kunzwa kuburikidza neShoko Kristu. "
upenyu hwedu pane zvokunamata kunotanga nokutenda muShoko uye mberi pamwe chete. Asi mazuva ose tiri kuitwa tichiona nenhema nenyika, nyama, uye dhiabhori kodzero? Unoita sei kurwisa nhema? With chokwadi! Saka pano muenzaniso sei kushandisa Shoko raMwari. Zuva nezuva tinonzwa mashoko nezvebonde, tichiona kuchena mifananidzo, uye mwoyo yedu vatadzi vanoda kuti titende nhema idzodzo. Saka isu kurwisa nhema vaya chokwadi. Shoko raMwari rinotii panyaya unzenza?
Nokuti ichi ndicho chido chaMwari, vatsvene kwenyu: kuti imi murege upombwe; kuti mumwe nomumwe wenyu azive kudzora muviri wake oga muutsvene nokukudzwa, asingaiti nekuchiva kwechishuwo akafanana vaHedheni vasingazivi Mwari. (1 VaTesaronika 4:3-5 BSN)
Tiri akafanana motokari. Isu kudzingwa negasi nezuva. Kuti tirambe tichifamba nokutenda, tinoda chinotsva. Kuti mafuta iShoko raMwari. Kana tisina kuti mafuta isu haazorambi kuvimba naye. Kwete kutaura kana tisingadi kuverenga Shoko zuva rimwe tichasangana hakuna Musiki apo isu ukamuka. Asi kana Handisi muShoko, Ndinonzwa sokuti. Ndinonzwa kwokusatenda kukudyira kutenda muzvinhu zvakasiyana-siyana muupenyu hwangu.
Uye isu Havarwiri nokutenda muShoko oga. Tinoda vanhu vaMwari.
Asi kurudziranai zuva nezuva, chero bedzi inonzi "nhasi,"Kuti hapana unogona unowomeswa kubudikidza nekunyengera kwechivi. (Hebrews 3:13 BSN)
Nokuti avo vedu vari muimba iyi manheru ano vari vatendi, ndezvipi ukama hwako kufanana nevamwe vaKristu? Unoziva chete kuchechi here kana kupedza nguva hwakanaka nevamwe? Tinoda chaizvo kufamba nevamwe vaKristu. Tinofanira kuva pedyo ukama. Tinoda mumwe nokuda kuzvidavirira. Pandakaberekwa kudanana mudzimai wangu, raigarwa chinhu chakanga vanhu muupenyu hwangu kundidzorera kuzvidavirira miganhu yedu.
Kana wakambotamba kuisa kutenda kwako muna Kristu, haufaniri kupa mu. Iwe asunungurwa. Uye kana uchifamba munzira kuti rusununguko, uchakwanisa kunakidzwa noupenyu zvazvinofanira kuti hunakidze. Uchakwanisa kurarama nzira takasikwa kuti tirarame.
Saka isu murwire kutenda, asi chii anoita vanoteerera, upenyu akatendeka Kutarira akafanana? Chii chinombodiwa kutarisa akafanana kana tichirarama nokutenda muna Mwari wakanaka?
II. The Life Good inovakwa Around Jesu
Paiva zvinhu Ndakaverenga mangwanani musi somuKristu kuti akakoromora wangu wekare mufananidzo upenyu hwakanaka. Heuno muenzaniso.
Tose vakanzwa vanhu kutaura nezverufu nguva nenguva. Isu Makanzwa vanhu vanoti, "Hapana muupenyu ndechechokwadi asi rufu nemitero." Mumwe yakakurumbira rapper akati, "Ndiri kuedza kurova upenyu 'chikonzero handigoni kubiridzira rufu." Vanhu kunzwisisa kuti rufu hazvingadziviswi. Asi sezvo muKristu wechiduku, Ndakaverenga ndima nezvorufu muBhaibheri kuti akanga akaita ndakanga akambonzwa pamberi hapana. MuApostora Pauro akataura nezvorufu vari vatorwa nzira. Pauro haana kungoti rufu aiva nechokwadi, Akahutora rimwe danho. Akati, "Kufa ifuma." Chii!?
Rufu kana uropi hwako, mwoyo yenyu, uye mapapu ako kurega kuita basa ravo. Rufu zvinoreva mhedziso upenyu uye kuparadzana nevemumhuri. Rufu zvinoreva basa kuti upenyu hwako huri pamusoro. Kusiyana nezvimwe miedzo yedu, rufu, nokuti munhu anenge afa, chaizvoizvo "kuguma kwenyika" - kuguma yeuyu racho. Saka sei aigona kufa angava pfuma? Ini handigoni kuita mari kana ndikafa? Ini handigoni kuwedzera mamiriro angu kana ndafa. Vakanga kufanira yangu ekare pfungwa upenyu hwakanaka.
Zvakanaka kuti ini kunzwisisa Pauro airevei nemashoko aya mana mashoko - "kufa ifuma" - ndaifanira kunzwisisa mana akasvika pamberi pavo chaipo. In Philippians 1 Pauro anotsanangura nei sokuti kuva OK pamwe kana kuramba mupenyu kana kufa pane mumaoko vaimutambudza. Anonyora mundima 21, "Kurarama ndiko Kristu. "Nemashoko iwayo, Muapostora akandiudza chaizvoizvo chii upenyu nezvei - kwete mari, kwete basa rangu, kunyange mhuri - asi Jesu. Sei wangu aigona anongozvifunga, chinzvimbo-yakazara worldview vararame pedyo chokwadi kuti?
Ndakacherechedza kuti anobudirira zvikuru vatambi chero mutambo, ari Champions, vose vane zvimwe. Vane Kunyanya kuhwina. Uye Kuramba kwavo, ichi chido zvakadzama kuhwinha, trumps zvose zvavo nedzimwe zvido vari mutambo. Saka havasi kunyanya kushushikana pamwe endorsements, kana zvichiita kunoratidzei Gwenzi, kana padding Stats dzavo. Zvirokwazvo kufunga kuti zvinhu, asi pakupera kwezuva, kuti kwete zvavanenge kutamba nokuda. Ivo kutamba kuhwinha. Saka kana vaine mukana kwaizobatsira navo, asi kwete chikwata, ivo zvakaitika. Vanongoda kuhwina.
Zvakanaka kuti vane mitambo mitambo. Ngatifungei pamusoro upenyu. In upenyu, kuti chinhu Pauro nechido. Kuti kuchiva trumps zvimwe zvishuwo zvose. Kuti chido kuti supersedes vose ake mamwe nokuchiva Kristu. Hakusi kuti anovenga upenyu, kana mhuri, kana hwomutambarakede; kungotadza kuti kukudza Jesu mukuru. Ndicho chinhu chikuru. Uye pachena kubva nezvaakataura anonyora mundima.
Pauro anoti VaFiripi 1, kuti aigona kurarama kana kufa; uye vaizoenda akanaka nokuti Jesu achakudzwa. uye ndima 21 rinotiudza nei. Anonzwisisa chinhu. Kurarama ndiKristu. Upenyu Kristu. Takasikwa naJesu uye Jesu. Jesu ndiye Muponesi ngoni vakanga vamire panzvimbo yedu uye anotipa upenyu hutsva. Jesu ndiye murevereri wedu pamberi paBaba. Jesu anofanira kuva nechido vose zvisarudzo zvedu. Jesu anofanira kuva kukonzera zvose zvataiita. Zviri ALL nezvaJesu. Hapana upenyu hwakanaka kunze kwaJesu, nekuti pasina Jesu upenyu hahuna zvahunoreva. Kurarama ndiKristu.
upenyu hwako hakusi pamusoro pako, asi nezvaJesu. Saka ichi anochinja nzira kuti tinoona zvinhu zvose.
Zvakadini kurota kwedu uye zvinangwa? Unofanira kuva hope makuru uye zvinangwa mikuru, asi vanofanira kuva nechokuita naJesu. Takasikirwa kuti kurarama nenzira inoratidza kuti kuva ani Ndiye. Pauro anoti VaFiripi 1 kuti kana anorarama ari munyama zvinoreva basa kwaAri zvibereko.
Muchibata FOR JESU
Rinondiyeuchidza nyaya kusetsa. Nguva imwe, Ndaiva Dallas uye ndakaenda mumwe chandinonamatira zvakakanyiwa namafuta huku mavara, William zvaJehovha Chicken. Basa iri nguva dzose chinosemesa, asi huku iri rakanaka. Drive kuburikidza basa zvakaipa, asi zvino ini kuenda kumberi. Iye kure kumashure ndichitaura uye ndinogutsikana pfungwa. Akati, "Oh, wangu vakakanganwa iwe BRO Ko iwe zvakaipa. "anorevei iwe vakakanganwa? Muri kubasa! Ndizvo zvaunoita kubasa. Sei kukanganwa kushanda? Atanga kutsauswa.
Saizvozvowo zvazvo, tiri saka nyore kutsauswa. Tinokanganwa chii tanga kuisa pano kuita. Uye tiri asingakurumidzi kutsamwa pamusoro okutambura kwaAri, saka zvose kupenyerera zvinhu nyika kupa kudhonza isu kure.
Muchibata nokuti Kristu hazvirevi isu tose tinofanira kuva vaparidzi. Tinoda Magweta, rap, vanyori, Mahweta, uye chitoro mamaneja vanoda Jesu. Saka hazvirevi tinofanira tose tiende kuchinja zvatinoita kana kuvimbisa kuita, kunyange pamwe zvichakufambira. Zvazvinoreva chaizvoizvo zviri, tinofanira kuva aiziva chii Mwari akakudanirai tiite sevatendi, uye edza sei kushanda kuti vari nemamwe mamiriro ezvinhu edu. Richafa kutarisa yakasiyana upenyu siyana, asi tinogona kuita kuti kubwinya kwake.
Ndinoziva vamwe vaparidzi vanoshandisa ndima zvakaipa, kuti tibvume kuti hapana nemiedzo. Mukuona kwavo noupenyu hwakanaka yatiinayo muna Kristu upenyu husina chero miedzo zvino. Ndinogona kuita zvinhu zvose - izvi chaizvoizvo kureva? Kuti kunyange zvazvo ini muchayamwa panguva Basketball, kuburikidza naKristu Ndinogona kuva NBA zvose-nyeredzi? Aihwa, Pauro akanga achiti kana ndiri mupfumi kana murombo, Ndiri kugutsikana. Nekuti ndine Kristu.
Mwari haana kufanana vamwe vanaamai vedu vepasi uye nemadzibaba avo vasina vachabvuma isu kana isu hatisi panguva pamusoro chepamusoro manera. Mwari haarayiri chinzvimbo, iye anorayira Kutendeka.
Ndiri akashora pandinoverenga aPauro, kunyanya kufunga mamiriro ezvinhu aPauro. Pauro ari pakati akashata ezvinhu. Asi gogorosi anoona izvozvo kuburikidza kuchinja zvose. Kurarama ndiKristu ari izvo anoona muedzo wake kuburikidza.
Dzimwe nguva isu kukanda Achiviruka somwana pakati nemiedzo, nokuti tinofunga ezvinhu ose ari pamusoro pedu. Tinofunga uye isu kuzovakwirira shamwari dzedu, nezvokuti isingaruramisiri zviri, uye sei zvakaoma zviri. Tikakandira akura hasha mwana nokuti tinofunga edu ezvinhu zviri pakupedzisira nezvedu kuva wakasununguka. Asi havasi. Havachina nezvaJesu. Taizofanira mutsimba mumiedzo zvakasiyana, kana pane kuongorora sei zvakanaka tiri tingadai kufunga sei kukudza Jesu mukati maro. Ndicho upenyu hwakanaka.
Ko kuvaka upenyu hwenyu kumativi Jesu zvinoreva kuti yazvinofanira kufinha kana pasina mufaro? Chokwadika kwete. Ndinoziva nhema angaita seanotora mwoyo dzimwe nguva, asi chokwadi chiri chinhu akafa magumo. Zviri kupfura zvakare pasi. Kutevera Jesu hakurevi hatidi kunakidzwa zvinhu, zvinongoreva zvinoreva isu tifare nazvo zvakarurama. Pane zvichitungamirira kurwadziwa hunozoita kuti uwane mufaro.
Zvose zviri nani kana vakanakidzwa ari akapoteredza zvazvinofanira. Ushamwari hunonakidza kana akavaka rakamupoteredza. Two zvaregererwa vanhu kukanganwira mumwe, izvo zvinoita ushamwari chinotapira. Unogona kusunungurwa kuti vanakidzwe mari, kana musinganamati naro.
Mufaro hahugari. Vaya kuvaka upenyu hwavo kumativi zvinhu maturo vakazviita kuparadzwa. Asi vaya kuvaka upenyu hwavo kumativi Kristu anogona husingazomboparadzwi. Ndicho chipo chinobva kuna Mwari uye haikwanisi ichabviswa.
Saka tine zvimwe zvakawanda nezvoupenyu huno hwakanaka, asi papi zvakabva? Sei isu kundoitora?
III. Upenyu Zvakanaka Chipo Chinobva Kuna Mwari Ane Rudo
Mwari anoda kuti tirarame upenyu hwakanaka. Iye akasika imi kurarama upenyu hwakanaka. chivi wedu chii akaramba isu kubva. Nhema isu wakaudzwa ndechokuti Mwari anoda kutitadzisa upenyu hwakanaka. Kufanana Anoda kuti mwoyo ndokurasikirwa mufaro zvose. Asi izvozvo pusa.
Vanotida zvokuti kunyange zvazvo isu takatadza uye vakaparadzaniswa naye, Akatuma Jesu kuti tive nazvo. Takanga kubviswa Mwari, kunobva zvose zvakanaka.
Paiva misiyano yakawanda pakati mufananidzo zvandakadzidza kubva Pauro upenyu hwakanaka, uye mufananidzo zvandakadzidza kubva mutsika. Asi mumwe mukuru kusiyana kuri sei isu ikoko. Nyika akatengesa kwatiri "upenyu hwakanaka" kuti tinofanira kuwana. Uye kunyange vamwe ravanoita chakaomesesa kugona kuita izvozvo, zvazvichipo pasigasvikirwi. Asi biblical mufananidzo "upenyu hwakanaka" akasiyana. Ndicho chipo chokungopiwa izvozvo hunowanika.
Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo. Uye ichi hachisi pachake kuita kwenyu; ndicho chipo chaMwari, kwete nokuda kwemabasa, kuti kurege kuzvikudza. (Ephesians 2:8-9 BSN)
In John 11, Jesu anoti, "Ndini kumuka noupenyu. Ani naani anotenda kwandiri, kunyange akafa, asi uchararama, uye munhu wose mupenyu uye anotenda mandiri haangatongofi. "Iwayo mashoko akanaka.
Achivimba Jesu zvinoreva tiri akadzoserwazve Mwari, riri zvinoshamisa nhau nokuti takasikwa kunakidzwa Mwari. Tinowana kunakidzwa iye zvino muShoko raKe. Tinoda kuona mitambo, uye vatambi zvikuru nokuti isu tinakidzwe ukuru. Hakuna ukuru mukuru kupfuura Mwari akavasika. ukuru hwake anoita nekwavo kutarisa kusiririsa.
Ndokusaka Pauro aigona kutaura kuti "kufa ifuma,"Nokuti kana akafa kana akararama, Jesu achakudzwa. Upenyu zvinoreva Anoomesa kushumira Jesu uye rufu zvinoreva Anoomesa kuva naJesu - uye hapana kumwe vaizoenda nani kuva (Philippians 1:23). Tinogona kudzidza kubva Pauro pano. Chokwadi, zviri nani kuva tsvina murombo pamberi Jesu pane kuva tsvina akapfuma pamberi pevanhu.
Unoshuva kuva naJesu? Hatizofi kukwanisa kutaura kufa ifuma, kusvikira Tinonyatsoda Jesu. Unoziva vanomuda kupfuura upenyu huno? Pisarema 73. The chete nzira yokuwana pane kuburikidza nokutarisa naye muShoko rake uye achisiyana zvinhu kudzikatidza chiono chako. Vamwe vedu nei isu vasingadi Jesu zvikuru, asi isu vanonamatira zvinhu kutitadzisa pedyo naye. Dzokai uye kumhanya kwaAri. Izviwo pakurwa nokutenda.
Tinogona kurarama nzira takasikwa kuti tirarame.
Dai ndakanga ndisina kuona kupiswa itsva mufananidzo upenyu hwakanaka ndingadai watambisa hwangu upenyu kudzingana zvinhu kuti hazvina basa. Asi nenyasha dzaMwari akandiratidza mashoko mana iwayo: kurarama ndiKristu. Uye akandipa nyasha kurarama nokutenda muna Mwari wakanaka.
Zvakanaka? Ndiani rinotsanangura zvakanaka? Mwari anoita. Good ari kukudza Jesu nokuva naye. Chero bedzi ndaitenda nhema tsika akandiudza, Handina kurarama upenyu hwakanaka. Asi pandakatanga kurarama nokutenda muna Mwari wakanaka, upenyu hwangu hwakanaka vakatanga. Ndakatanga kuona upenyu zvakanaka sezvo upenyu patsva naJesu, akadzingwa naJesu, uye akararama kubwinya kwaJesu. Murume anogara pachake anowana chinhu usingaperi muupenyu huno, uye achaita chete nekusangana kunoparadza kurasikirwa chinotevera. Asi murume anogara nokuda Kristu awana kuravira cheupenyu zvakanaka zvino, uye rufu rwake chete kunounza kwaAri chii Anoda zvikuru.
sheyi • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 11:39 pm • pindura
A chikomborero chikuru ichi chave kwandiri. Ishe achangobva akapindura minyengetero yangu. Amen
Bman • Mbudzi 15, 2013 pa 2:00 ndiri • pindura
Izvi zvechokwadi ziso opener .thnx